Kidney – Healthy Life Journal
ကျောက်ကပ်ပြည်တည်တာက မခွဲစိပ်ပဲ ဆေးစွဲသောက်မယ်ဆိုရင် ပျောက်နိုင်လား
Q.ကျောက်ကပ်ပြည်တည်တာက မခွဲစိပ်ပဲ ဆေးစွဲသောက်မယ်ဆိုရင် ပျောက်နိုင်လားရှင်။ TM(FB) A. ကျောက်ကပ်ပြည်တည်တာက သိပ်မကြာသေးဘူး၊ အများကြီးလည်း မဖြစ်သေးဘူး။ ရေအိတ်လိုလည်း ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်တော့ ပဋိဇီဝ ပိုးသတ်ဆေး (Antibiotics) တွေ အချိန်မီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ မခွဲမစိတ်ဘဲ ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်တွေက များလာတယ်၊...
ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေး သိလိုရာမေး (၄)
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ကျောက်ကပ်မှာ ရေအိတ်တည်တာကို မစုပ်ထုတ်ဘဲ ရေအိတ်ချပ်သွားတဲ့ ကုသနည်း (သို့) ဆေးနည်း ရှိ၊ မရှိ သိပါရစေ။ ကျောက်ကပ်မှာ ရေအိတ်တည်လို့ စုပ်ထုတ်ထားပြီး အခုပြန်ပြည့်လာပါတယ်။ စုပ်မထုတ်ချင်လို့...
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ဆီးချိုရှိလို့ မက်ဖော်မင်ကို သောက်နေရပါတယ်။ အဲဒါ သူများတွေကပြောကြတာ မက်ဖော်မင်သောက်ရင် ကျောက်ကပ်ထိတယ်ဆိုလို့ ရပ်လိုက်ရမှာလား။ (သန်လျင်သဘာဝတရားရိပ်သာမှ မေးမြန်းသူတစ်ဦး) A. အရင်ဆုံးပြောချင်တာက ဆီးချိုသမားအနေနဲ့ အစားအသောက်ကို ထိန်းရပါမယ်၊...
ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေး သိလိုရာမေး (၂)
…၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊… ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့ အကြိမ်ရေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တူသလား . . . Q. ကျောက်ကပ်ဆေးတာ လူနာရောဂါအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အကြိမ်ရေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွာခြားပါသလား။ ကျောက်ကပ်ဆီးအခြေအနေကြည့်ပြီး ဘယ်နှရက်ကို...
ကျန်းမာတဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့
…………၊ ဒေါက်တာဦးလှအောင် (ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) ၊………….. Q. လူတစ်ယောက် ကျောက်ကပ်ကျန်းမာဖို့ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. လူတစ်ယောက်က ကျောက်ကပ်ကျန်းမာဖို့ဆိုရင် ပထမဆုံး ကျောက်ကပ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါမဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ၊...
——၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——- နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါက ဒီနေ့ခေတ်မှာ အဖြစ်များလာတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ သွေးတိုးရောဂါလို နာတာရှည်ရောဂါတွေကို စနစ်တကျ ကုသမှုမခံယူတာက ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောက်ကပ်ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ သိထားသင့်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်သည့်...
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. ဘာကြောင့် ကျောက်ကပ်ဆေးရတာပါလဲ ဆရာ။ A. ကျောက်ကပ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာက လူ့ခန္ဓာကိုယ်က အညစ်အကြေးတွေကို စွန့်ထုတ်ပေးတာပါ။ ကျောက်ကပ်ကနေ ဆီးတွေစွန့်ထုတ်ပေးတဲ့နည်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာစေပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ဟာ လူတစ်ယောက် စားသမျှသောက်သမျှ အစားအသောက်တင်မက ဆေးဝါးတွေကိုပါစစ်ထုတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကနေ...